Waqtiga Hargeysa la keenayo Maydka Marxuum Fagadhe iyo cidda bixisay Kharashka lagu soo qaadayo | Somaliland.Org
December 31, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Keenadiid Maxamed Khaawi oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Sool, ayaa sheegay in Sabtida soo socota Hargeysa la keeni doono maydka Danjirihii Somaliland ee Faransiiska oo dhowaan geeriyooday.
Mr. Keenadiid Khaawi oo xalay khadka Telefoonka kula soo xidhiidhay Wargeyska Ogaal, isagoo jooga magaalada Jabuuti, waxa uu sheegay in Xukuumaddu bixisay kharashka marxuumka Fagadhe iyo walaalkiiba lagu soo qaadayo. “Diyaaraddu hal maalin bay timaadaa Jabuuti (duulimaadka Faransiiska ka yimaadaa), waana maalinta Sabtida ah, isaguna (Fagadhe) Alle haw naxariistee wuxuu dhintay Sabtidii hore. Markaa haddii Alle idmo, Sabtida 7:30 ayuu maydka Fagadhe iyo walaalkii imanayaan Jabuuti, waxayna u soo gudbi doonaan Hargeysa, iyadoo isla maalintaa lagu aasi doono xabaalaha qaranka ee Hargeysa,” ayuu yidhi.
Mar la waydiiyay cidda bixinaysa kharashka Paris lagaga soo qaadayo maydka marxuum Fagadhe, waxa uu Mr. Khaawi ku jawaabay; “Kharashka waxa bixinaysa dawladda, iyadaana qorshaysay inuu sidaa u dhaco oo la soo qaado maydka iyo walaalkii oo Siciid la yidhaahdo. Xukuumaddu marnaba may odhan bixin mayno kharashka marxuumka iyo eheladiisa inta imanaysa ku baxaya.”
Mar la sii waydiiyay xilliga maydka Marxuumku soo gaadhi doono Hargeysa, waxa uu yidhi; “Marka uu maydku Sabtida 7:30 subaxnimo Jabuuti yimaado, Daallo ayaa loo soo saarayaa Hargeysa oo loo qorsheeyay, ilaa 11:00 barqonimo ee isla Sabtida ayayna Hargeysa imanaysaa.”